Dowladda Shiinaha oo Dalab u dirtay Madaxda Soomaalida | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dowladda Shiinaha oo Dalab u dirtay Madaxda Soomaalida
Dowladda Shiinaha oo Dalab u dirtay Madaxda Soomaalida
Wakiilka Joogtada ah ee Shiinaha u fadhiya Qaramada Midoobay Zhang Jun ayaa ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo khilaafka ka taagan qaboomida doorashada ka dhaceysa.
Zhang Jun oo ka hadlaayay kulankii shalay ee Golaha Ammaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in xal buuxa laga gaaro is-marin waaga siyaasadeed ee ka jira doorashada Soomaaliya, taas oo uu xusay inay ku jirto danta dadka iyo dalka.
Madaxda Soomaalida ayuu Zhang Jun ugu baaqay inay xoojiyaan midnimada iyo iskaashiga, isla markaana ay sameeyaan tanaasul, si Deg-deg ahna heshiis looga gaaro doorashada, lana soo celiyo kalsoonida siyaasadeed.
Wakiilka Joogtada ah ee Shiinaha u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa Carabka ku dhuftay in Madaxda ay u diyaar garooban qaban-qaabada doorashada dhaceysa, si uusan dib u dhac mar kale ugu imaan, lana muujiyo isku soo dhawaansho.
“Waxaan ku dhiiri gelinaynaa dhinacyada Soomaaliya in ay ka hormariyaan danaha dalka, xoojiyaan midnimada iyo iskaashiga, sameyaan tanaasulada lagama maarmaanka ah, dib u dhiska kalsoonida siyaasadeed, si deg deg ah ugu heshiino qabanqaabada, doorashooyinka, soo celinta xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya si loo helo shuruudo wanaagsan oo loogu talagalay kalaguurka amniga iyo dib u dhiska qaranka,” ayuu yiri Zhang Jun .
Hadalka Wakiilka Joogtada ah ee Shiinaha ee Qaramada Midoobay ayaa waxaa uu kusoo aadaya, iyada oo maalinta berri oo khamiis ah lasoo xiro Shirka Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad Goboleedyada uga socda Muqdisho, kaasi oo heshiis looga gaaray khilaafkii doorashada.
Maqaal horeXuutiyiinta oo gacanta ku dhigay Askari dil u geystay Muwaadin Soomaali ah
Maqaal XigaQ/Midoobay oo welwel ka muujisay Go’aankii DFS ku diiday John Mahama